(စိန္ အလံုးေပါင္း ၅၄၄၈ လံုး၊ ေရႊခ်ပ္ တန္ခ်ိန္ ၆၀) ေဒၚလာ ၈ ဘီလွ်ံေက်ာ္ တန္ဘိုး ရွိ တဲ့ ေရႊခ်ပ္ေတြ နဲ႔ ပတ္ပတ္လည္ ဝက္အူစုတ္ထားတဲ့ ေရႊတိဂံုဘုရားအေၾကာင္း – MyanmarEating
( ၂၀၁၃ ) ဧျပီလစာရင္းအရ ….
တန္ဘိုးမျဖတ္နိဳင္တဲ့ ပတၱျမား လံုးေခ်ာ ေပါင္း ၂၃၁၇ လံုး
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ နီလာ မေရတြက္နိဳင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း လံုးေခ်ာမ်ားနဲ႕တျခား တန္ဘိုးၾကီး ရတနာေျမာက္မ်ားစြာဟာ လက္ရွိကာလတန္ဘိုး ျဖတ္မရနိဳင္ေအာင္ တန္ဘိုးၾကီးပါတယ္ ။
စိန္ဖူးေတာ္ ကေတာ့ (၇၂) ကာရက္ ရွိတဲ့ တစ္လံုးထဲ ကမာၻ႕ ရွားပါး စိန္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ ေတြက ေစတီျပင္ပမွာရွိတဲ့ အေရအတြက္ေတြပါ …။
ရင္ျပင္ပတ္လည္က အရံေစတီေတြ ရုပ္ထုေတာ္ေတြမုခ္ေလး မုခ္က အေဆာက္အဦး ဌာပနာေတြ စာရင္းမပါေသးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ….နဴးတို႕ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္မွာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ….
ျမန္မာ ေရွး ဘိုးေဘးေတြ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ တည္ထားခဲ့တဲ့ ဒဂံုဆံေတာ္ရွင္ ၾကီးမွာ ဒီလို တန္ဘိုး မျဖတ္နိဳင္တဲ့ ကမာၻကေတာင္ ၾသခ်ရတဲ့ ကမာၻ႕တစ္ခုထဲေသာ ေရႊခ်ပ္ေတြနဲ႕ တည္ထားတဲ့ အၾကီးဆံုးေစတီေတာ္ၾကီးရွိခဲ့ဘူး တာကို နဴးတို႕ရဲ႕ ေနာင္လာေနာက္သား ေျမးျမစ္ေတြသိရေအာင္ မွတ္တမ္းထားခဲ့ၾကတာေပါ့။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ လုံးပတ်ကို အခေါက်ရွေ တန်ချိန် ၆၀ ကို ရွှေချပ်အထူတွေသွန်းပြီး ၀က်အူနဲ့ စုတ် ထားတာပါ။
( ၂၀၁၃ ) ဧပြီလစာရင်းအရ ….
၃၂၆ ပေ မြင့်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ လုံးပတ်ကို ရွှေချိန် ရွှေချပ် တန် ၆၀ ( ၈ ဘီလျှံ ဒေါ်လာကျော် လက်ရှိတန်ဘိုးရှိတဲ့ ရွှေချပ်တွေ ) နဲ့ ပတ်ပတ်လည် ၀က်အူစုတ် ထားတာပါတဲ့ …။
တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပတ္တမြား လုံးချော ပေါင်း ၂၃၁၇ လုံး
မြောက်များစွာသော နီလာ မရေတွက်နိုင်သော ကျောက်စိမ်း လုံးချောများနဲ့တခြား တန်ဘိုးကြီး ရတနာမြောက်များစွာဟာ လက်ရှိကာလတန်ဘိုး ဖြတ်မရနိုင်အောင် တန်ဘိုးကြီးပါတယ် ။
စိန်ဖူးတော် ကတော့ (၇၂) ကာရက် ရှိတဲ့ တစ်လုံးထဲ ကမ္ဘာ့ ရှားပါး စိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ တွေက စေတီပြင်ပမှာရှိတဲ့ အရေအတွက်တွေပါ …။
ရင်ပြင်ပတ်လည်က အရံစေတီတွေ ရုပ်ထုတော်တွေမုခ်လေး မုခ်က အဆောက်အဦး ဌာပနာတွေ စာရင်းမပါသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ….နူးတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ တစ်ချိန်တစ်ခါက ….
မြန်မာ ရှေး ဘိုးဘေးတွေ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာ တည်ထားခဲ့တဲ့ ဒဂုံဆံတော်ရှင် ကြီးမှာ ဒီလို တန်ဘိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကတောင် သြချရတဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်ခုထဲသော ရွှေချပ်တွေနဲ့ တည်ထားတဲ့ အကြီးဆုံးစေတီတော်ကြီးရှိခဲ့ဘူး တာကို နူးတို့ရဲ့ နောင်လာနောက်သား မြေးမြစ်တွေသိရအောင် မှတ်တမ်းထားခဲ့ကြတာပေါ့။
Originally posted 2018-11-01 13:12:36.